प्रकाशित: शुक्रबार, मंसिर १९, २०७७, २१:४४:०० तीर्थराज बस्नेत
काठमाडौं– गत बुधबार कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई गृह जिल्ला तनहुँमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो।
यो घटनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई लामो निद्रापछि बिउँझिएझैँ बनाएको छ।
‘कुम्भकर्ण’ शैलीमा सुतेको कांग्रेस आफ्ना नेता पौडेल पक्राउपछि झस्कियो।
घटनाको तीन दिनपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाए।
बैठकले पौडेल पक्राउको विरोध र भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेको सरकारविरूद्ध मंसिर २९ गते देशभर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
चिसो मौसममा शुक्रबार साँझ बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा कांग्रेस नेताहरूले गर्मागरम बहस गरे। बहसपछि निष्कर्ष निस्कियो– पार्टीले खेलेको प्रतिपक्षीको भूमिका फितलो हुँदा सरकारले पेल्यो।
जनताले प्रतिपक्षीको भूमिकामा पठाएको तीन वर्षपछि कांग्रेस नेताहरू ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध यसरी खनिएका हुन्। त्यही पनि आफ्ना नेता पक्राउ परेपछि।
पुल उद्घाटनका लागि गृह जिल्ला पुगेका पौडेललाई प्रहरीले तीन घण्टा नियन्त्रणमा लिएर छोडेको भोलिपल्ट (बिहीबार) कांग्रेसले ठूलै दलबल उतारेर पुल उद्घाटन गर्‍यो। जुन कार्यक्रममा पौडेलसहित तीन केन्द्रीय सदस्य, जिल्लास्तरका नेता, छिमेकी जिल्लाका नेता र सांसदहरूको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रममा अधिकांश नेताले एकैस्वरमा भनेका थिए- कम्युनिस्ट सरकारले सुतेको बाघलाई जिस्कायो, अब कांग्रेस बिउँझियो। हामीलाई बिउँझाएकोमा धन्यवाद।
हुन पनि पाँच महिनादेखि संसद बन्द हुँदा कांग्रेसको वाक्य फुटेन। कोरोना महामारीका बेला दुःख, कष्ट भोगेका जनताका पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्ने बाहेक कांग्रेसको उपस्थिति देख्न पाइएन।
देशका विभिन्न ठाउँमा घटेका आपराधिक घटनाका बारेमा न कांग्रेस बोल्यो न त कतै देखियो। भ्रष्टाचारका अनेकौं घटना सार्वजनिक हुँदा कांग्रेसको स्वर दबैकै देखियो। अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका खाली विज्ञप्ति निकाल्नेमा सीमित बन्यो।
सरकार बरालिएको थियो तर, उसलाई सही बाटोमा हिँडाउन भूमिका खेल्नुपर्ने दल आफैं मस्त निद्रामा थियो।
बरु कांग्रेसका नेताहरूको प्रस्ट भूमिका र ठूलो स्वर पार्टीभित्र मात्रै सीमित भयो। त्यो पनि आन्तरिक किचलो, आगामी महाधिवेशनमा हुन सक्ने सम्भावित नाफाघाटाको हिसाब किताबमा।
नेता पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा नलिएको भए सायद कांग्रेस आन्तरिक घनचक्करमै फँसिरहेको हुन्थ्यो। र त, बूढानीलकण्ठ बैठक सकिएपछि पौडेलले सञ्चारकर्मीमाझ भने, ‘सरकारले दमनकारी नीति लियो। सर्वसत्तावादतर्फ मुलुकलाई लैजान खोजियो। अब हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौं।’
कांग्रेस हेपिनुपर्ने अवस्था कसरी आयो त ? पौडेलको जवाफ छ, ‘हाम्रै ढिलासुस्तीका कारण हामीलाई हेपिएको हो। हामी अब हेपिन्नौं, हेप्न दिँदैनौं।’
पौडेल पक्राउको घटनाले कांग्रेसलाई बिउँझाएन मात्रै पार्टीभित्रको विग्रहको मिलन बिन्दुसमेत पहिलाउने आधार बनाइदिएको छ।
बूढानीलकण्ठमा भेला भएका शीर्ष नेताहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्- हामी झगडामा भुल्यौं। मौका छोपेर सरकारले खान लाग्यो। अब आन्तरिक समस्या पनि समाधान गरौं र सरकारसँग लड्न एकतावद्ध हौं।
मंसिरभित्र पार्टीका सबै समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढ्ने सहमति बैठकले जुटाएको छ।
कहिले विभाग विस्तारका नाममा, कहिले भातृ संस्था, विधान त कहिले महाधिवेशनको कार्यतालिकाका नाममा किचलो गरिरहने कांग्रेस नेताहरू मंसिरभित्रै विवाद समाधानसँगै महाधिवेशन कार्यतालिका तय गर्न सहमत भएका छन्।
पौडेल पक्राउले बनेको यो सहमति कायम रहला वा नरहला त्यो समयक्रमसँगै थाहा होला। तर, यो घटनाले कांग्रेसलाई सडक र सदन दुवैमा आफ्नो उपस्थिति कमजोर हुँदा सरकार बरालिएको स्वीकार्न बाध्य बनाइदिएको छ। र, आफ्नो जिम्मेवारी सम्झाइदिएको छ।
घटनाबारे पौडेलको बकपत्र
म माथि जुन घटना घट्यो, यो सरकारको दमनकारी नीतिको परिणाम हो।
सरकार जतासुकै दमन गर्र्ने बाटोमा छ। मुलुकलाई सर्वसत्तावादको बाटोमा लैजान उनीहरूले दमनकारी बाटो लिएका छन्।
यस्ता घटना गाउँ, जिल्लामा नभएका होइनन्। तर, यसले पराकाष्ठा नाघ्यो।
अब यो भन्दा बढी सहन सकिन्नँ। देशलाई हेर्दाहेर्दै प्रतिगमन र सर्वसत्तावादतर्फ लैजान खोजेका छन्। हामीले सरकारलाई सचेत गराउन मंसिर २९ गते एकदिने विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेका छौं।
हामी आफ्नै घरझगडामा भुल्यौं। हाम्रो झगडाको मौका छोपेर सरकारले खान लाग्यो। सरकारको प्रतिवाद गर्न हामीले ढिलासुस्ती ग¥यौं। त्यही ढिलासुस्तीका कारण सरकारले हामीलाई हेप्यो।
अब हामी आन्तरिक समस्या मंसिरभित्रै टुग्यांउँछौं। महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि टुंगो लगाउँछौं। सरकारविरुद्ध सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउँछौं। हामी अब हेपिन्नौं, र हेप्न पनि दिँदैनौं।
कम्युनिस्टहरूको चरित्र लोकतन्त्रवादी होइन। उनीहरूले लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेका छैनन्।
सरकारमा रहेका बेला मुलुकलाई सर्वसत्तावादमा लैजानुपर्छ भनेर उनीहरूले मौका छोपेका छन्। राज्यलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दैछन्।
केपी ओली लोकतन्त्रवादी छैनन्। उनी लोकतन्त्रका लागि लडेका पनि होइनन् र त्यसकै खातिर जेल बसेका होइनन्। जुन कुरा मैले तनहुँमा पनि बोलेको छु।
अब उनी लोकतन्त्रवादी हुन् भने आफैंले व्यवहारमार्फत् देखाउनुपर्छ। बोलीमा लोकतन्त्रवादी देखिएर अब कसैले पत्याउनेवाला छैन।
पौडेल समूहले किन छोड्यो सशक्त आन्दोलनको एजेन्डा ?
ओलीले चुनाव गराउनेमा कांग्रेस ढुक्क!
१ सहिद दुर्गानन्द झा : जसलाई मृत्युदण्ड दिन मुलुकी ऐन नै संशोधन
२ ‘चियाको कप पनि सेलाउन नपाउँदै संसद् विघटनको सिफारिस सदर गर्न मिल्छ श्रीमान्?’
३ सुर्खेतमा २८ सयलाई कोरोना खोप लगाइने
४ कर्णाली : समृद्धिको ‘ढोका’ खोल्दैन सरकार, बुझ्दैन सीमावासीका दुःख
५ नर्स किन महिला नै ?